६४ प्रतिशतले विघटन गरेको हो‚ पुनर्स्थापना हुँदैन, सडकमा कपडा नबिगार्नुहोस: ओली
तपाईं नै सचिवालयमा प्रस्ताव राख्नुस् भनेँ उहाँले राख्नुभयो। गत वर्ष माघ १४ देखि १९सम्म भएको केन्द्रीय समिति बैठकले तीन महिनाभित्र टुङ्गाउने कुरा अढाई वर्षसम्म भएन। खाली सरकार सुस्त भयो। संवैधानिक परिषद्‌मा नियुक्त गर्ने कुरामा बैठक नै बस्न मान्नुभएन। अध्यादेश फिर्ता लिए बस्छु भन्नुभयो। फेरि फिर्ता लिएँ‚ फेरि ममाथी अविश्वास, राष्ट्रपतिलाई
महाअभियोग र अन्य संवैधानिक अङ्गमा महाअभियोग हाल्ने तयारी गर्नुभयो। यो लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्न खोज्नुभयो। खसीको टाउको देखाएर अर्कैकै मासु बेच्न परेको छ। युवाहरुलाई सेन्टिमेन्टमा ल्याएर कतिको बिजोग भएको छ। कतिको खुट्टा छैन‚ कतिको ढाड छैन। उहाँलाई यस्तोमा के थाहा। उहाँ त परिवारमा केन्द्रित हुुनुहुन्छ। उहाँ आफू केन्द्रित
हुनुहुन्छ। लोकेन्द्र विष्ट किन कृषितिर लाग्नुभयो। हिजो कालीबहादुर खाम चाहिन्थ्यो‚ अहिले किन चाहिँदैन। हिजो हजारौँ चाहिएको थियो‚ अहिले उहाँलाई उनीहरूको परिवारको चिन्ता छ? माधव नेपालको बारेमा टिप्पणी गर्नु छैन। उहाँ त प्रचण्डको एउटा मामुली कार्यकर्ता हुनुभएको छ। मलाई पदको लोभ छैन भन्नुहुन्छ। तर म उधारो पत्याउँदिन पनि भन्नुहुन्छ।
आन्दोलन फुटाउन पनि दुई तीनवटा अध्यक्ष चाहिन्छ। अध्यक्ष नै नभई नहुने किन हो मलाई भन्नु छैन। छेउमा बस्न पाएकै थिए। म धेरै टिप्पणी गर्दिनँ‚ फेरि उहाँ दुःखी हुनुहुन्छ। समय कति लाग्छ थाहा छैन। वैशाखबाट सकिन्छ भन्नुभएको थियो। म मरिहाल्छ भन्नुभयो मरिनँ। पोहोरो म बैंकक गएँ। काठको बाकसमा फर्कन्छ भन्ने थियो होला‚ प्लेनमा आएँ। पछि अप्रेसन
गर्नुपर्‍यो‚ अब गयो भन्नुभयो तर म मरिनँ’। मान्छे मरोस् भन्ने कल्पना विरोधीलाई पनि गर्नुहुँदैन। बलियोसँगै लड्न मजा आउँछ‚ रोगीसँग होइन। उहाँहरु चुनाव हुँदैन भन्नुहुन्छ। वैशाखको चुनावमा पत्तासाफ पनि भन्नुहुन्छ। म उहाँहरुलाई भन्न चाहन्छु। तपाईंहरुले पनि केही सिट ल्याउनुस्। सडकमा गएर कपडा नबिगार्नुस्‚ तयारीमा लाग्नुस्। लोकतन्त्र आइसक्यो।
उहाँहरुले नै भनेको होइन? लोकतन्त्रको एउटा राम्रो कुरा भनेको समय समयमा जनताको बीचमा ताजा जनादेशका लागि जाने हो। त्यहाँबाट अनुमोदन भएर आउने हो। पर-पर सिँगौरी खेल्न सजिलो छ। कहिले माइतीघर‚ कहिले रत्नपार्क जानुभएको छ। एक्लै खेल्न सजिलो छ। जनताले मतदान गरेपछि थाहा हुन्छ। अहिलेदेखि चुनावको तयारी गर्नुस्। संसद
पुनर्स्थापना हुन संविधानले मिल्दैन। हुने भए मिल्छ। ६४ प्रतिशत बहुमत भएको नेताले गरेको विघटन हो। त्यतिबेला ६४ प्रतिशतको सर्वसम्मतले गरेको निर्णय हो। ३६ प्रतिशतले हुँदैन। ५१ प्रतिशत चाहिन्छ। अब त्यो सम्भावना छैन। धारा ७६ को उपधारा ४ ले राष्ट्रपतिले प्रतिनिधी सभा विघटन गर्ने र राष्ट्रपतिले नयाँ निर्वाचनको मिति तोक्ने भनिएको छ। धारा ८५
ले पाँच वर्ष अगावै भनिएको छ। बेलायतमा लिखित संविधान छैन तर अस्ति भर्खर निर्वाचन भएको छ। चुनाव गर्दा गाणतन्त्र र लोकतन्त्र केही जाँदैन। ताजा जनादेशले झन् बलियो बनाउँछ। देशमा अन्धकारमा फस्न नदिने हो। हामी नभएको भए संविधान बन्दैन थियो। हामीले कसरी अरुलाई अड्याउनु परेको थियो? यदि हामी नभएको भए नाकाबन्दीको सामना
कसले डटेर गर्दथ्यो? नेपाल सार्वभौम स्वतन्त्र देशले घेरिएको थियो। अर्को देशबाट समुन्द्रमा जान सकिन्छ भनेर हामी नहुदाँ कसले भन्यो? चीन र भारत त्यहीँ थियो तर पारवाहन सम्झौता किन भएन? तीनतिर नाका किन खोलिएन? त्यसका लागि देशको स्वाभिमान र स्वाधीनताका लागि प्रयोग गर्ने आँट हामीले देखाएका हौँ। म फेरि चुनावपछि सरकारमा आउनुअघि
पुनर्निर्माण भएन भन्नुभयो।धरहरा त्यस्तै थियो। म बनाउँछु मेरो धरहरा सुरू भयो। अब केही महिनापछि २२ तले धराहरा घुमी घुमी हेर्न पाइन्छ। अब नभत्कने गरी बनेको छ। लोकतन्त्र पहिला खोसियो मानिसहरुमा झस्को छ। पछि २०५९मा पनि खोसिएको थियो। त्यो वेला कुखुरा खाने स्याल थियो। कुखुरा हराएको थियो अब राजसंस्था छैन। यहाँ कसैले खोस्दैन। जनता
सचेत र एकजुट भएर आन्दोलनमा उत्रने अवस्था थिएन‚ त्यसैले लोकतन्त्र खोसिएको थियो। अब जनता सचेत छ। अब लोकतन्त्र कसैले खोस्न सक्दैन। आफूमा विश्वास गर्न आग्रह गर्दछु। गणतन्त्र र लोकतन्त्र खोस्न सक्ने कसैको तागत छैन। केही मान्छेहरु किन उत्ताउलिएका हुन मलाई थाहा छैन। सरकारले चुनाव घोषणा गरेको छ। मिलेर जाउँ सामाना गरौ
भनेको छु। तर उहाँहरुले केपी ओलीलाई पार्टीबाट निकाल्नुभयो। उहाँहरुले दिएको पार्टी हो र? मैले सदस्य बनाएको हो। बैंकमा काम गरेको मान्छे आदत बसेछ उधारो हुँदैन भन्नुहुन्छ। मैले केही भन्नु छैन। कमिलालाई काल आयो भने पखेटा पलाउँछ र फुर फुर गरेर उठ्न थाल्छ चराहरुले टिपेर खान्छन्। यो सबै हिसाब जनताले राखेका छन्।
तपाईंहरू आउनुस् स्वच्छ र धाँधलीरहित निर्वाचन हुन्छ। बत्ति निभाइने छैन। मतपत्र च्यातिने छैन। मतपत्र च्यात्ने र बत्ति निभाउने सोच्नु भएको भए सम्भव छैन। बक्सा साट्न पाइने छैन। निर्वाचनमा भाग लिनुुस्। नडराउनुस्। उहाँहरूले जिन्दगीभरी मरुभूमिमा हुने फल रोप्नु भएको छ। हाम्रो उद्देश्य स्पष्ट छ। अघि-पछि शान्त बस्छ तर आफ्नो बच्चामाथि
आक्रमण गरेमा बाघिनिले आक्रमण गरेजस्तो गर्छ। हामीले लडेर ल्याएको गणतन्त्रमाथि आक्रमण सह्य हुनेछैन। केपी ओली तानाशाह भन्नुभएको छ’। प्रतिस्पर्धाबाट डराउनु डराएर मतपत्र च्यात्ने पद्धतीबाट आएको होइन। झलनाथ खनालसँग र माधव नेपालसँग चुनाव लडेर अध्यक्ष भएको हुँ। मलाई हिँड्न नसक्ने भनेर उहाँहरूले अभियान नै चलाउनु भएको थियो। तर
निर्वाचन भनेको दौड प्रतियोगितामा भाग लिने होइन। आउनुस् चुनाव गरौं। संविधान सभामा निर्वाचन हार्ने अनि स्पिङबाट हाइजम्प गरेर प्रधानमन्त्री र संविधान निर्माण समितिको सभापति बन्ने उहाँ के लोकतन्त्र खोज्नुहुन्छ?